चितवनमा मृत भेटिएका सेनाका हुद्दालाई सेनाकै सिपाहीले नै सि’ध्याए ! – Kavrepati
Home / समाचार / चितवनमा मृत भेटिएका सेनाका हुद्दालाई सेनाकै सिपाहीले नै सि’ध्याए !
admin July 24, 2021	समाचार Leaveacomment 145 Views
भरतपुर महानगरपालिका–१७ सिमलडाडाँ खेतमा बिहीबार बिहान मृतावस्थामा भेटिएका नेपाली सेनाका हवल्दार भरत गुरुङको ज्या न सेनाकै जवानले गरेको खुलेको छ । पक्राउ पर्नेमा भरतपुर–२१ का २६ वर्षीय गंगाधर ढकाल छन् । धादिङ निलकण्ठ नगरपालिका–१३ का ३६ वर्षीय गुरुङ र ढकाल दि फेमस महेन्द्रदल गण शिवपुरीमा कार्यरत थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ढकालले जग्गा किन्न भनि आएका गुरुङ्लाई बिहीवार बिहान झोलामा रहेको ह’तिया’र निकालेर मोटरसाइकल पछाडि बसिरहेका अवस्थामा ह’ ‘त्या गरेको जानकारी दिइयो ।
Next अब सवारी धनीले ब्लुबुक बोक्न नपर्ने, कसरी हुन्छ चेकिङ्ग ?,,हे’र्नुहोस।